Track 12: All My Love — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Jay waa xaas iyo qalbigiisa uu u malaynayay in la iska xiraa
Waan ku baryayaaye, isna wuxuu u burburin off laakiin waxa uu wiiqay gudahood
Oo isna lagu lumin lahaa hadii uu mar kale iyada oo aan ka arki kartaa, uu dhan in
Baby halkan u timid
Sababta waxaan ka helay waxa samayn aad u baahan tahay
Oo waa inaad ku doonayaan, aad rabto
Igu soo noqda arki
Sababta aan la sugi idiin tan iyo subaxda
Oo jacaylka oo dhan waxaan ugu ballanqaadaan
Waxaa halkan fadhiya sugaya kaliya in aad soo hesho, aad u hesho
jacaylka oo dhan
Waxaa halkan fadhiya sugaya kaliya in aad soo hesho
Hey uu marna ma arag wajiga kuweed ah oo lagu daray iyada xaq u xidhnaa sida
lama dagaallami karaan rabitaanka, had iyo jeer uu iyada la kulmay goobta isla
Uu wiil u sheegay isaga u sheegi naagtiisa 'sababta tani ma aha xaq u
Laakiin waxa uu ahaa mid aad u cabsan, ayay ugu dambeyntii qabtay isaga oo ay la dagaalamaan
Words beddeleen ayay jeceshahay “waxa mas'uul ka this aad la khiyaameeyay
Ma lagu arkaya qaar broads kale?”
Waxa uu kinda haatan ku xayiran oo sidaas daraaddeed ayuu hoos u taageeray
Waxa uu dareemayaa sida ay tahay in uu daadan dhan xaqiiqooyinka hadda
Oo sidaas daraaddeed isagu iyada sheegayaa 'xumad uu lover kala duwan
Oo jaceeylka ku saabsan sida uu had iyo jeer isha ku sawiro iyada
Waa qabatinka ah waxa kan sharka leh ayuu dooneynaa inaan ku saxno
Laakiin dareen ah waa ku jirtaa, uu run ahaantii kexeeyey oo uu bilaabo inuu la yaabanahay
Tani ma u qalantaa? 'Naagtiisa keeni sheegay in uu TGS dooran
Waxay jeceshahay, "Waa iyada ama ii aad qoyskaaga xumad uu furo"
Haddaba Jay helay blues ah, uu doonayo in uu qaylin
Sababta uu jeclaataa naag in quruxsan shaashadda
My dude Jay waa at a waddooyinka cross
Waxa uu dareemay in uu haystay farxad iyo farxad laakiin badiyay kuwa
Dareemeysaa naf badiyay hoos ordaya jidka qaldan
"Sidee ayaan halkaan ka heli?"
Waxa uu uu waqtiga oo dhan low
Oo haatan uu qaylinaya oo qaylinaya
xunyihiin sida, "Sida ay xataa i heli?"
Markaasuu xusuusteen in Ilaah uu si fudud aan caloosha karaa
dembi Our kuwa sharka leh oo uu u edbiyo inay naga jebin waxaa ka mid ah
Haddaba waxaa isaga ku dhufan waxyaalaha moolka dheer oo dhaawicii uu sababay
Habka ugu Eebihiis kuwa u dhegaysanayay iskutallaabta in wasakh ayuu ka xumaaday,
Qaabka uu u yeeli naagtiisa flirts iyo duleella u qalloociyeen
Waxa uu itaal qasan ku wareegsan iyo lumin qoyskiisa, oo sidaas daraaddeed ayuu hakad
Wuxuu qaadataa uu laptop iyada sawir ku hortegi lahaa ku
Oo isna wuxuu u badneyd la dubbe ka dibna waxay qaadataa qashinka baxay
Waxa uu ku baaqay in isaga, xaaskiisa iyo waxa uu isqoomameeyey ilmada
Oo sheegay in uu doonayo in uu la ka go'an muddo sanado ah
Oo Ilaah maqla
Waxa aan odhan “oo sidaas daraaddeed ayuu qoob ka QOOBKACIYAAR laakiin waxaan halmaamay in la yidhaahdo, iwm…”? Waxay u muuqataa sidii aad laba jeer soo noqnoqda wax.
Caitlin • Laga yaabaa 26, 2016 at 11:03 pm • Reply
song Tani waxay si cad u hadlay ii. Waxaan la lulataaye dhibtooday, waayo, wakhti dheer. Waxaan weli aad mararka qaarkood la jirrabay, laakiin Ilaah aad ii ka dhex. Waxaan dumiyeen ilmada markuu maqlay this song maxaa yeelay, in kastoo aan la i guursan ama wax aan weli halgan kula xitaa hesho xiriir. Waad ku mahadsan tahay wax badan u la wadaago this song!
Ilaah ha idiin barakeeyo,